Zuva, zvese kana hapana zvegore 2019 | Ehupfumi Zvemari
Zuva, zvese kana chero chinhu chegore 2019
Imwe yemaitiro anofanirwa kutarisisa mukati megore rino yatichangotanga hapana mubvunzo kuti rakanyorwa Zuva.Hazvishamisi kuti ndeimwe yetsika dzakadzikira zvakanyanya mukati megore rapfuura. Kwasvika kupi kurasikirwa kupfuura 100% nezvekukosha kwayo mumusika wayo wemasheya, uye kuti yanga iri nyaya yemazano asina kunaka kubva kune vanoongorora zvemari avo vakapa odha yekutengesa seyakakurudzirwa kwazvo. Kunyangwe pasina kupokana kuti neiyi kukosha chero chinhu chinogona kuitika kubva ikozvino zvichienda mberi.
Kambani yekugovera mukugadzirwa kwechikafu yatove pasi peyuniti yuniti asi ini ndinoratidza kuti mamiriro ayo anogona kuwedzera kuipa mumwedzi mishoma inotevera. Inogona kutoiswa pazasi pe0,50 euros pamugove. Mune chingave chiratidzo chitsva chine simba chekushomeka icho chingadzikise mafambiro ekudzokerera muukoshi. Hazvishamisi kuti panguva ino zvakaomarara kwazvo kuti utore divi raingatora.
Día ndechimwe chechengetedzo dzinoumba inosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, kunyange hazvo runyerekupe runoratidza kuti aigona kuisiya chero nguva. Hazvishamise kuti huwandu hwayo hwekutengesa hwadonha zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura nekuda kwekurasikirwa kwechido pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe iine mukana wekuti icharega kunyorwa pamisika yemari.
1 Zuva: pazasi pe1 euro
2 Une rwendo rwekumusoro here?
3 Mhedzisiro yakaipa yebhizinesi
4 Kutengesa pane kukosha
Zuva: pazasi pe1 euro
Vese vatengesi vanoshamisika kuti yavo yemutengo mutengo parizvino uri pasi peeuro imwe. Kunyanya kana makore mashoma apfuura zvaive pamatanho e 5 na6 ma euro mugove. Mune mamwe mazwi, iwe warasikirwa zvinopfuura zana muzana zvekukoshesa kwako mune ipfupi nguva yenguva. Mune kumwe kushamisika kukuru mumakore achangopfuura nekuenzana kwenyika. Kunyangwe kune rimwe divi, ivo vanoshamisika kana iri nguva yakanaka yekuvhura zvigaro muukoshi nemutengo wakaderera zvekuti urikuratidzira parizvino.
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kujekeswa kuti kunyangwe hazvo zvikamu zveZuva zviri kutengesa pazasi peyuniti yuniti, hazvireve hazvo kuti stock iri yakachipa pamutengo. Kana zvisiri, pane kudaro, izvo zvarinoratidza ndeye kushaya simba kwakanyanya uye inogona kunge iine yakawanda yekudzika kufamba. Iko kwaisazove kushamisa kwazvo kana ikakwanisa kushanyira nhanho zvishoma pasi pe0,50 euros mumavhiki anotevera.
Une rwendo rwekumusoro here?
Kutora pamitengo yazvino, ndizvo zvakajairwa kune vashoma nevepakati varimi kushama kuti kukosha uku hausi wekutenga mukana chaiwo. Zvakanaka, mune ino pfungwa, kune vanoverengeka vanoongorora zvemari vanotenda kuti Día yaizofanirwa kudzosera 160% yeiyo yazvino kukosha kuti uwane bullish zvakare. Icho chinhu chakaomesesa zvekuti chinogona kugadzikana, zvirinani munguva ipfupi nepakati. Nekuti maitikiro ayo panguva ino akajeka kwazvo nekuti haisi imwe kunze kwekutonga kwazvo pane ese mari yekudyara.
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa izvozvo kana tichitengesa pazasi peiyo yuro yuniti zvakanyanya kunetsa kudzosera danho rakakosha iri. Sezvazvakaitika kune kumwe kuchengetedzeka kwenyika kwakapfuura nemamiriro ezvinhu akafanana. Kunyangwe, kune rimwe divi, ichifanira kutaurwa kuti inogona kunge iri imwe yemasheya akachengetedzwa ane mukana mukuru wekudzokorodza, asi nenjodzi inodarika zvinoonekwa mune zvese mashandiro ayo mumisika yemari. Nesimba rakanyanya kusagadzikana sezvo ichipa musiyano mukuru pakati pemitengo yayo yepamusoro neepasi.
Mhedzisiro yakaipa yebhizinesi
Chimwe chinhu chakaita kuti kambani iyi inyorwe pamatanho azvino mhedzisiro isina kusimba yebhizinesi yavakaratidza munzvimbo dzekupedzisira. Iine kukosha kwakanyanya mune yayo chikwereti Iwe uri kubvunza kugona kweako mutsara webhizinesi. Kune rimwe divi, mune ino pfungwa, kutaurirana nemabhangi kuidzikisa kunotora kukosha kwakakosha. Ehezve, mamiriro ayo ebhizinesi akaderera zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei mutengo waro wemugove wakadzika zvakanyanya.
Izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti cheni yekugovera chikafu iri kurasikirwa nemugove wemusika uchienzaniswa nevanoikwikwidza zvikuru. Mune ino mamiriro, kune vatove vashoma vashoma mari vanoramba vachivimba iyi kukosha kwesarudzo inosarudzika yeSpanish equities. Kusvika pakuve imwe yeakanyanya kuzvibata mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Nechiitiko chakajeka kwazvo chekutengesa pakutenga, nehukuru husingawanzoonekwa mumakore apfuura. Uye nenzira iyi haikwiri, kure nazvo.
Kutengesa pane kukosha
Panguva ino, chero chekupinda chekutenga mukambani yakanyorwa chinoreva njodzi huru iri pamusoro kupfuura yeimwe kuchengetedzeka kwemari. Chero zvazvingaitika, nekukurumidza kana iwe ukavandudza yako bhizinesi ratios, unogona kuburitsa inonakidza kwazvo mubairo kune vashoma nepakati varimi. Ichave mumwe mubatsiri uyo musangano uchave nawo kubva zvino zvichienda mberi. Kwete pasina, iyo kupora masendi mashoma mukukosha kwayo anogona kumiririra huwandu hweeuro zhinji mukushanda.
Kubva pane ino maonero nezvekudyara, inova inoteerera kune mashandiro anoitwa panguva imwechete yekutengesa. Ndokunge, kune mafambiro akadanwa intraday. Kune rimwe divi, zvinodawo kuti utsanangure kuti iyi kambani inogovera chikamu pakati pevachagovana navo gore rega riine purofiti iri padyo ne7%. Kuva mumwe wepamusoro-soro muIbex 35. Kunyangwe pane imwe nguva inogona kudzikiswa kana kutobviswa nekuda kwekudonha kwemibairo yeiyi kukosha saka inomiririra huwandu muSpain. Nechiitiko chakajeka kwazvo chekutengesa pakutenga, nehukuru husingawanzoonekwa mumakore apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zuva, zvese kana chero chinhu chegore 2019
Dambudziko riri kubuda rinoita misika